Warkii.com-News and information about Somalia Sawirro: Sida ay u shaqeyso Warshad soo Saarta Dharka oo laga Hirgaliyay Muqdisho. - Warkii.com-News and information about Somalia
Sawirro: Sida ay u shaqeyso Warshad soo Saarta Dharka oo laga Hirgaliyay Muqdisho.
Dalka soomaaliya waxa uu muddo laga joogo 25 sano ka hor lahaa warshado dhowr ah kuwaasi oo soo saari jiray noocyada kala duwan ee sheeyadda warshadaasi waxaa laga xusi karaa , Warshadii Dharka ee Balcad , Midii Sonkorta ee Jowrah , Warshadii Caanaha ee Xamar, Warshadii Hilibka ee Kismaayo iyo kuwa kale nasiib daro waxa ay kaalintoodii wax soo saarka burburtay markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe uu dalka lahaa.
Dowladihii dalka Soomaaliya soo maray kuma aysan guuleysan in ay soo celiyaan warshadihii dalku uu lahaa waxa ayna taasi sababtay in guud ahaan waxyaabaha wadanka lagu isticmaalo sida cuntada iyo dharkaba, iyaga oo ay soo sameeyeen warshado kale iyo dalal kale ay dibadda nooga yimaadaan ,waxaa Soomaaliya keena ganacsato Soomaaliyeed oo haddii ay fikiraan awoodi kara in ay wadanka ka hirgaliyaan warshado yar yar si in badan oo waxyaabaha dibada ka imaado ah looga maarmo.
Wixii ka danbeeyay sanadkii 2000 waxaa dalka Soomaaliya ka hana qaaday warshado yar yar oo ay sameynayaan ganacsato si iskooda ah isku howlay kuwaasi oo sameeyay warshado laga xusi karo kuwa Soo saara Biyaha , Joodariyada , iyo kuwa kale oo soo saaro alaabo yar yar sida Oomo , Cabitaano iyo waxyaabo kale ,balse waxaa dhibaato ku ah ma helaan dhiiro galin fiican oo ku aadan waxsoo saarkooda, iyo warshado dowladeed oo caawiya.
Labo sano ka hor dalka Soomaaliya waxa laga hirgaliyay warshada Astur oo sameyso noocyo kala duwan oo dhar ah kuwaasi oo ay ka mid yihiin dharka Uniform ka , kuwa ay ku labistaan ilaalada goobaha ganacsiga qaar ,iyo dharka raga iyo Dumarka , in kastoo dharkaasi wadanka lagu sameeyo haddana lagu dhex isticmaalo dalka gudihiisa ma gaarin wali dharka ay soo saaraan in looga maarmo dharka dalka dibadiisa laga keeno , sababta oo ah ma jirto caawimaad lala garabtaagan yahay, sida ay u shaqeyso warshadaasi yar ee soo saarto qeyb ahaan dharka waxaa warbixintan codeysan nooga diyaariyay Maxamed Cismaan Nuur.